Faah faahin: Askar lagu laayay duleedka Degmada Balcad | Dhacdo
Home Wararka Maanta Faah faahin: Askar lagu laayay duleedka Degmada Balcad
Faah faahino ayaa ka soo baxaya laba weerar oo maanta siyaabooyin kala duwan Ciidamada Militariga ee Dowladda Federaalka loogula eegtay duleedka Degmada Balcad ee Gobolka Shabellaha Dhexe.
Weerarka hore ayaa ka dhacay duleedka waqooyi ee Degmada Balcad, ka dib markii Shabaabku ay wadada u galeen laba gaari oo kuwa shacabka ah, balse ay la socdeen Ciidamada Militariga. Mid ka mida gaadiidkaasi ayaa baasuuke/saban lagu dhuftay, sida dadka deegaanka ay sheegeen.
Gaari kale oo kuwa dagaalka ah oo ay la socdeen Ciidamada Dowladda oo gurmad ahaa ayaa waxaa qarax lagula eegtay nawaaxiga deegaanka Gololey, oo hoos-tagga Degmada Balcad. Inta laga warqabo labadaasi weerar waxaa lagu dilay toban ka mida Ciidamada Dowladda.
Ururka Al Shabaab ayaa sheegay in ay qarax la beegsadeen gaari ciidan oo ay la socdeen Ciidamada Dowladda, ayna ku dileen toddobo askari, isla-markaana ay ka furteen afar qori iyo booshashkooda.
Shabaabka ayaa war ay soo saareen ku sheegay in qaraxyo kale oo galabta ka dhacay duleedka Balcad ay ku dileen toddobo ka mida Ciidamada Dowladda iyo mid ka mida Ciidamada Amisom. Sida ay Shabaabku sheegteen isku gayn waxay labadaasi weerar ku dileen shan iyo toban askari.
Saraakiisha Ciidamada iyo Maamulka Hirshabelle ayaan ka hadlin labada weerar ee maanta ka dhacay duleedka Degmada Balcad.
Horaantii bishan laba qarax oo ka dhacay Galbeedka Degmada Balcad waxaa lagu dilay laba qof, halka lix askarina lagu dhaawacay.
Wadada xiriirisa Degmooyinka Balcad iyo Jowhar ayaa billihii ugu dambeeyay ahayd mid xiran, ka dib markii uu ku fatahay Webiga Shabelle, taasoona yareysay qaraxyadii ka dhici jiray.
Previous articleGuddiga Doorashooyinka Qaranka oo Warsaxaafadeed soo saaray
Next articleDab xoogan oo caawa ka kacay Warshadda Isbuunyada Shaakir ee Baydhabo